EU – democracy for burma
On July 3, 2014 July 3, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
ตามที่มีกระแสข่าวว่า ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยบางประเภทไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ได้ ภายหลังการออกมาตรการระงับการเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visits) นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันว่า มาตรการดังกล่าวบังคับใช้เฉพาะการเยือนอย่างเป็นทางการในระดับรัฐมนตรีขึ้นไปเท่านั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางทั่วไปของไทยยังสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศในสหภาพยุโรปได้ตามกฎระเบียบการขอรับการตรวจลงตรา (visa) ของแต่ละประเทศดังเดิม
#ข่าว #คสช #อียู #EU #thailand #ประเทศไทย
On June 24, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
EU Council conclusions on Myanmar/Burma FOREIG AFFAIRS Council meeting Brussels, 16 December 2013
On December 16, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
On November 18, 2013 November 18, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
EU MYANMAR TASK FORCE
On November 14, 2013 November 14, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
credit aung thu ra
Thursday, 14 November, UMFCCI, Yangon (No. 29, Min Ye – Kyawsaw Road – Lanmadaw Township)
Democratic Civil Society Forum (board-room UMFCCI 2nd floor)
Round-table discussion with the participation of HR/VP Ashton and Daw Aung San Suu Kyi
Development Forum (Part II)
(main conference room UMFCCI 1st floor)
Moderated panel discussion on Myanmar’s development priorities and challenges with interventions
from Union Minister for National Planning and Economic Development Dr Kan Zaw; EU Development
Commissioner Andris Piebalgs; Daw Aung San Suu Kyi; Antonio Tajani, Vice-President of the European
Commission, responsible for Industry and Entrepreneurship.
########### Continue reading “EU MYANMAR TASK FORCE” →
The Social Costs of Fracking- study Pennsylvania communities.
On September 24, 2013 September 24, 2013 By Burma Myanmar newsIn AseanLeaveacomment
U WIRA THU : “သင်္ကန်းဖြူစာတမ်း (၂)”(ဒီစာတမ်းလေးကို 19.6.2007 မှာစရေးပြီး 25.6.2007 မှာ အပြီးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
On September 16, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
(ဒီစာတမ်းလေးကို 19.6.2007 မှာစရေးပြီး 25.6.2007 မှာ အပြီးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ထောင်ထဲမှာပိတ်ဖြူဝတ်ဘဝနှင့်ရေးခဲ့ရတာမို့ သင်္ကန်းဖြူစာတမ်းလို့ အမည်ပေးထားတာပါ။ စရေးတုန်းက ထောင်မှလွတ်ရင် ကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ သဘောလောက်သာဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထုကို ချပြဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီစာတမ်းကို နိုင်/ကျဉ်းတွေ ဖတ်ကြည့်မိတဲ့အခါ အသက်နှင့်လဲ စောင့်ရှောက်နေမယ့် စာမူဆိုပြီး ပိတ်ဖြူပေါ် ပြန်ကူးရေးပြီး-အပြင်ခိုးထုတ်ပေးပါတယ်။ ထိုမှတစ်ဆင့် မဲဆောက်ရောက်သွားပါတယ်။ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုအသုံးပြုတယ် (လုပ်စားတယ်) ဆိုတာတော့ ခုထိမသိရပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒီစာတမ်းလေးဟာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ အကျိုးပြုခဲ့ကြောင်းကိုတော့ ဆက်လက်ရှုစားက သိသာနိုင်ပါတယ်။
ရွှေဝါရောင် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဆက်လက်တင်ပြသွားပါ့မယ်။)
သာသနာဖျက် န.အ.ဖ.။ ။ န.အ.ဖ အစိုးရသည် လူထုအပေါ် သြဇာညောင်းသော သံဃာတော် များကိုလည်း ပစ်မှတ်ထား၍ ဖျက်ဆီးခဲ့၏။ ပထမပြန်စာမေးပွဲများကို နှစ်စဉ်မေးခွန်းပေါက်ကြားအောင် လုပ်ခြင်း၊ ဗဟိုစစ်အဆင့်မှ တိုင်းစစ်အဆင့်သို့ လျှော့ချပစ်ခြင်း၊ ဓမ္မာစရိယစာဖြေဌာနများကို ခရိုင်အဆင့်များသို့ ပြောင်းရွှေ့၍ လူစုခွဲပစ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ရဟန်းပျို စာသင်သံဃာများ ပညာရည်နိမ့်အောင် ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။
ဆရာတော် သမားတော်ကြီးများကိုလည်း ဘွဲ့တံဆိပ်များဖြင့် ဖျက်ဆီးခြင်း၊ TV၊ Video၊ မော်တော်ကား၊ ပါမစ်၊ တယ်လီဖုန်း၊ ကျောင်းစသည့် ပစ္စည်းလာဘ်လာဘများ အခွင့်အရေးများဖြင့် အကျင့်ပျက်အောင် ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့၏။
ထို့သို့မျှ မပျက်ဆီးသေး၊ မငြိမ်သေးသော ဆရာတော် သံဃာတော်များကို သင်္ကန်းချွတ်၊ လူဝတ်လဲ၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး ထောင်သွင်းအကျဉ်းချ၏။
ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရများအနက် န-အ-ဖ အစိုးရသည် ရဟန်းသံဃာများကို ထောင်ချရာ၌ သရဖူဆောင်းသော အစိုးရဖြစ်၏။ န-အ-ဖ အစိုးရလက်ထက်၌ အဖမ်းခံရသော ဘုန်းကြီး၊ စစ်သား၊ နိုင်ငံရေးသမားများသည် မဆလ လက်ထက်ထက် အဆရာထောင်ချီ၍ များပြား၏။ ဘုန်းကြီးများကို ဖမ်းရာ၌ လက်ရဲသော၊ စစ်သားများကို ဖမ်းရာ၌ ရက်ရောသော၊ နိုင်ငံရေးသမားများကို ဖမ်းရာ၌ အတိုင်းအဆမရှိသော သာသနာဖျက်အစိုးရဖြစ်၏။ ဇာတ်တူသားစားသည့် ဘီးလူးအစိုးရဖြစ်၏။ ပြည့်မျက်လုံး၊ ပြည်လက်ရုံး၊ ပြည်နှလုံးကို ဖျက်ဆီးနေသော ပရမ်းပတာအစိုးရဖြစ်၏။
ထို့အပြင် တုတ်ဓားလက်နက်ဟူ၍ တစ်ခုမျှ မကိုင်သော သပိတ်ပိုက် ကလောင်ကိုင် သံဃာတော်များ ကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ရာ၌ သွေးယဉ်နေသော အစိုးရဖြစ်၏။
နှစ်ဖက်ချွန်ဝါဒီ န.အ.ဖ။ ။ ပြည်တွင်ပြည်ပကို ဆက်ဆံရာ၌ န.အ.ဖသည် နှစ်ဖက်ချွန်ဝါဒကို ကျင့်သုံး ၏။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၌ မာယာဖြင့် လှည့်စား၍ အနိုင်ယူ၏။ NLD နှင့် အန်တုသူများအပေါ်၌ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် ဗျူဟာကို ကျင့်သုံး၏။ သူ့ထက်ကြမ်းသူနှင့်တွေ့လျှင်နုပြီး သူ့အောက်နုသူများ အပေါ်၌ ကြမ်း၏။ ကျားကိုမမာယာသုံး၍ မကိုကျားလို ရဲရင့်ပြတတ်၏။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာနှင့်ဆက်ဆံရာ၌ ဘိန်း ကင်းစင်အောင် လုပ်ဆောင်ပြ၏။ ၁၇-ဖွဲ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြ၏။ ညီလာခံကြီးကို လက်ညှိုးထိုးပြ၏။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာ လိမ်ညာထုတ်ပြန်၏။ သံချောင်းကိစ္စလိမ်သည်။ တပ်မဟာ(၇) ကိစ္စလိမ် သည်။ သက်ဝင်းအောင်ကိစ္စလိမ်သည်။ AAPP ကိစ္စ အကျဉ်းသားတွေကို ရေဒီယို နားထောင်ခွင့်ပေးထား ကြောင်း၊ TV တွေ တပ်ဆင်ပေးထားကြောင်း၊ ရေလောင်းအိမ်သာ လုပ်ပေးထားကြောင်း၊ သောက်ရေသန့်စက်ရုံ တည်ပေးထားကြောင်း၊ ကိုလိုနီခေတ်ကလို အကျဉ်းသားများအပေါ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု မရှိကြောင်း၊ လိမ်ညာ၏။ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေသော စစ်ဘက်အရာရှိများကို ဖြုတ်ကာ အောက်ခြေအဆင့်မှစတင်၍ အရပ်ဘက်အစိုးရ ဖြစ်အောင် စတင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပါပြီဟု နိုင်ငံတကာကို လိမ်ညာပြီး စစ်ဘက်အရှာရှိ (၁၅၀၀) ကို ဘောင်းဘီချွတ် အရပ်ဝတ်လဲကာ တစ်ဘက်လှည့်ဖြင့် မယက ခယက နေရာ၌ ခန့်ထားလိုက်၏။ ဤသည်မှာ လက်နက်ကိုင် ယောကျာ်းသားကြီးများဖြစ်လျက် နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်ဆံရာ၌ မိန်းမပျက်တစ်ယောက်လို မာယာသုံး ဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်၏။ အနုဝါဒကျင့်သုံးပုံဖြစ်၏။
ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန (သပိတ်မှောက်) အရေးအခင်း၌ တိပိဋကဆရာတော်ကြီးကိုတောင် မချန်ဘဲ သင်္ကန်းချွတ် ထောင်ချ၏။ သံဃာငယ်တွေကို ရဲဘက်ပို့ပြီး အလုပ်ကြမ်းခိုင်း၍ သတ်၏။ သံဃာအများအပြားသေ၏။ ကျောင်းတိုက်တွေကို သူပုန်စခန်းတစ်ခုလို ဝင်စီး၏။ TV မှာ သံဃာထုကို အရှက်ခွဲ၏။ လူထုအကြည်ညို ပျက်အောင်လုပ်၏။ ဒီပဲယင်းအရေးမှာ စစ်တပ်က သင်္ကန်ဝတ်၍ သံဃာယောင်ဆောင်ပြီး ဝင်ရိုက်၏။ အကြမ်းဖက်လုပ်ကြံ၏။ ဝီရသူ-အရေးခင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ တောင်းဆိုသော သံဃာထုကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်၏။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးသည် ကြမ်း၏။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးသည် ရိုင်း၏။ စစ်တပ်မှာ ဘာသာတရားမရှိ၊ သူတို့ကိုးကွယ်သော ကျောက်တော်ကြီးဘုရားက နိုင်ငံရေးတရားဟောလျှင်လည်း ထိုဘုရားကို မြစ်ထဲပစ်ချမည့် အစိုးရဖြစ်၏။ ဤသည်မှာ လူထု သံဃာထုကို ဆက်ဆံရာ၌ လက်ညှိုးကွေးခြင်း၊ အမိန့်ပေးခြင်း၊ လက်ထိပ်ခတ်ခြင်း၊ ဗျူဟာကို သုံးလေ့ရှိသော သူရဲကောင်းကြီးများ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပုံဖြစ်၏။ အကြမ်းဝါဒကျင့်သုံးပုံဖြစ်၏။ ထို့ကြောင် န.အ.ဖ အစိုးရကို နှစ်ဖက်ချွန်ဝါဒီ (နှစ်ဖက်ချွန်ဝါဒကို ကျင့်သုံးသူ) ဟု ဆိုရခြင်းဖြစ်၏။ Continue reading “U WIRA THU : “သင်္ကန်းဖြူစာတမ်း (၂)”(ဒီစာတမ်းလေးကို 19.6.2007 မှာစရေးပြီး 25.6.2007 မှာ အပြီးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။” →
Turkish security forces finds sarin gas in homes of suspected Syria Al-Qaeda linked Al-Nusra Front
On August 30, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
THE GOOD ARE NOT ALWAYS THE GOOD
Reports of chemical weapons use by both Damascus and the Syrian opposition have surrounded the conflict in Syria for months. http://rt.com/news/sarin-gas-turkey-al-nusra-021/